Maxay Tahay Sababta Dhabta Ah Ee Aan Loo Qaban Doonin Xaflad Sanadeedkii Liverpool Abaal Marinaha Ciyaartoyda Sanadkan? - Gool24.Net
Maxay Tahay Sababta Dhabta Ah Ee Aan Loo Qaban Doonin Xaflad Sanadeedkii Liverpool Abaal Marinaha Ciyaartoyda Sanadkan?
Liverpool ayaa sanadkan qabsan doonin xafladii ay jamaahiirta iyo ciyaartoyda kooxdeedu isku arki jireen ee abaal marinaha sanadka.
Liverpool ayaa xaflado waa wayn soo qabanaysay sanadihii ugu danbeeyay waxayna si qurux badan u soo bandhigi jirtay ciyaartoyda abaal marinaha kooxdeeda ku guulaysta.
Laakiin waxaa la xaqiijiyay in sanadkan ayna jiri doonin xafladii sida quruxda badan loogu soo labisan jiray ee kooxda Liverpool waxaana faah faahin laga bixiyay sababta dhabta ah ee arintan keentay.
Liverpool ayaa xaflad sanadeedka kooxdeeda qabsan jirtay todobaad ka hor ama ka dib kulamada Premier League ee xili ciyaareedka ugu danbeeya.
Laakiin Liverpool ayaan xili ciyaareedkan wax waqti ah u hayn in ay xafladayso maadaama oo ay dagaal xoogan ugu soo jirtay koobka Premier League oo ay maalintii xili ciyaareedka ugu danbeeyay ay u wayday Man City.
Laakiin kadib kulankii Premier league ugu danbeeyay Liverpool ayaa doonaysa in ay ciyaartoyda kooxdeedu waqti fasax ah u helaan diyaar garowga finalka Champions League kaas oo ay Tottenham la ciyaari doonaan.
Arinta saddexaad ee xafladii abaal marinaha Liverpool aan sanadkan loo qaban doonin ayaa ah in finalka Champions League kadib ay jiri doonaan kulamada UEFA Nations League oo ay ciyaartoyda Liverpool qayb ka yihiin.
Xulalka qaramada England iyo Holland ayaa shan maalmood kadib finalka Champions League ee waxay isku arki donaan Portugal waana kulan la doonayo in ciyaartoyda Liverpool qayb ka noqoto.
Van Dijk iyo Gini Wijnaldum oo xulka qaranka Holland ka tirsan iyo ciyaartoyda xulka England ee Liverpool u ciyaara ayaa shan maalmood kadib finalka Champions league ee Tottenham waxay ka qayb gali doonaan kulanka UEFA Nations League ee England iyo Holland.
Sidaa daraadeed, Liverpool ayaa jamaahiirta kooxdiisa Reds siinaysa fursada ay wali ugu codayn karaan ciyaartoydii ugu fiicnaa xili ciyaareedkan balse ma jiri doonto xaflad loo qaban doonaa.